Shirkii Archives - Page 3 of 4 - Ibsaa Jireenyaa
June 18, 2020 Sammubani Leave a comment
Soba Shirkii-Kutaa 2ffaa
Shirkiin soba akka ta’e kutaa 1ffaa keessatti ilaaluf yaalle jirra. Dhugumatti, Rabbii olta’aan alatti wanta biraa gabbaruun (waaqefachuun) soba soba hunda caaludha. Dhagaa ykn muka kadhaa namaa hin dhageenye kadhachuu fi waaqefachuun maal jedhamaa? Nama du’e kan kadhaa namaa hin dhageenye fi rakkoo namaa hin beekne kadhachuu fi waaqeffachuun maal jedhamaa? Nama fagoo namarraa jiru kan nama hin dhageenyee fi haala nama hin beekne kadhachuu fi waaqefachuun maal jedhamaa? Rabbii olta’aa kadhaa namaa dhagayuu, haala namaa beekuu fi argu dhiisanii uumama (makhluuqa) nama biraa dhiisitii ofuuyyu hin fayyanne kadhachuu fi waaqeffachuu irraa bu’aan argatan maalidhaa?
June 17, 2020 Sammubani Leave a comment
Wanti Rabbii olta’aa gaditti gabbaramu (waaqefatamu) hundi soba (baaxila)
Jalqaba soba ykn baaxila jechuun wanta haqa faallessu, hundee hin qabnee fi baduudha. Rabbii olta’aa gabbaruun haqa gadi dhaabbataa hin jijjiramneedha. Isaan ala wanta biraa gabbaruun immoo soba hundee fi ragaa hin qabneedha. Namni Rabbiin gabbaruu gabbarrii (ibaadaa) isaa irraa firii argata, ni mindeefama. Namni Rabbiin ala wanta biraa gabbaru immoo gabbarri isaa irraa firii homaatu hin argatu. Wanti inni hojjatu hundi ni bada. Akka awwaaraa bittinaa’a. Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa hojii namoota Isaan ala wanta biraa gabbaran (waaqefatanii) ilaalchisee ni jedha:
June 13, 2020 Sammubani Leave a comment
Shirkiin Aakhiratti Salphinna Guddaatti Nama geessa-Kutaa 4
Rabbii olta’aan alatti wanta biraa waaqefachuun shirkiidha. Shirkiin kuni salphinna guddaatti nama geessa. Namoonni Iyyasuus gooftadha jechuun waaqefatan shirkii hojjatanii jiru. Guyyaa Murtii Iyyasuus (nageenyi isarratti haa jiraatu) namoota isa waaqefatan ni morma. Qur’aana keessatti: